D-LINK ကို DIR-320 NRU ဘီးလင်းချိန်ညှိခြင်း - ကွန်ယက်နှင့်အင်တာနက်ကို - 2019
D-Link ကို DIR-320 NRU ဘီးလင်းချိန်ညှိခြင်း
Wi-Fi ကို router ကို D-Link DIR-320
D-Link DIR-320 ဟာ DIR-300 နှင့် DIR-615 ပြီးနောက်ဖြစ်ကောင်းရုရှားတွင်တတိယလူကြိုက်အများဆုံးက Wi-Fi ကို router ကိုဖြစ်တယ်, လုနီးပါးအဖြစ်မကြာခဏဒီ router ကိုသစ်ပိုင်ရှင်များဟာအထူးသဖြင့်ရန် DIR-320 ကို configure ဖို့ဘယ်လို၏မေးခွန်းကိုစိတ်ဝင်စား ပံ့ပိုးပေးသူ။ ဒီ router ကိုများအတွက်အများကြီးကွဲပြားခြားနားသော firmware ကိုရှိပါတယ်ပေးထားသည့်ဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုနှစ်ဦးစလုံးထက်အခြား, ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း setting ဖြစ်ပါတယ်တိုက်ရိုက် setup လုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ပြထားပါလိမ့်မည်သည့်ပြီးနောက်နောက်ဆုံးပေါ်အရာရှိတဦးကဗားရှင်းဖို့ router ရဲ့ firmware ကို update လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ firmware D-Link DIR-320 သငျသညျတွှေမဖြစ်သင့် - ထိုလက်စွဲစာအုပ်ထဲတွင်ကျနော်ပါလိမ့်မယ်အသေးစိတ်ဘာလုပ်ဖို့, ဒါပေမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ထက်ပိုမို 10 မိနစ်ကိုယူတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကိုလည်းကြည့်ပါ :. Router ကိုတက် setting များအတွက်ဗီဒီယိုညွှန်ကြားချက်
ချိတ်ဆက်ခြင်းကို Wi-Fi ကို router ကို D-Link DIR-320
Backside D-Link DIR-320 NRU
Router ကို၏နောက်ဘက်ခြမ်းတွင် cable ကိုပံ့ပိုးပေးဆက်သွယ်သော LAN interface ကို device များအတွက်4connectors အဖြစ်အင်တာနက်ကိုတစ်ဦးအဆုံးရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှု၌ Beeline ။ အဆိုပါ DIR-320 သည် router မှ 3G modem ချိတ်ဆက်ပါကဤလက်စွဲစာအုပ်အတွက်မဖုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကွန်ယက်ကဒ်နှင့်အတူဆိပ်ကမ်းများ LAN DIR-320jn cable ရဲ့တဦးတည်းချိတ်ဆက်ပါ။ အဆိုပါ plug ကိုသည်အထိ Beeline cable ကို - ထို firmware ကိုအောင်မြင်စွာ updated ထားပြီးချက်ချင်းပြီးနောက်ထိုသို့ပြုကြ၏။
ထို့နောက် router ကို၏တန်ခိုးကိုဖွင့်။ သငျသညျသေချာမသိကြလျှင်လည်း, ငါသည် Router ကို configure လုပ်ထားလေ့သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဒေသခံဧရိယာကော်နက်ရှင်၏ setting ကိုစစ်ဆေးအကြံပြုပါသည်။ ဒီအလုပျဟာကွန်ယက်နှင့်မျှဝေခြင်းရေးစင်တာ၏ဗဟိုကိုသွား, adapter settings ကို, Local Area Connection ကို click နှိပ်ပြီးပေါ်မှာ mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ - Properties ကို။ ပေါ်လာပြတင်းပေါက်များတွင်ထိတွေ့ရန်လိုအပ်ပါသည်သော IPv4 protocol ကို၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုကြည့်: တစ်ဦးအလိုအလြောကျ IP address ကိုအလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်ရန် DNS Server ကိုရယူပါ။ Windows XP မှာ, တူညီတဲ့အတွက် Control Panel ထဲကလုပ်ဆောင်နိုင်တယ် - ကွန်ယက် Connections ကို။ အရာအားလုံးကဒီလမ်းကို set up လျှင်, ထို့နောက်ကျနော်တို့လာမယ့်ခြေလှမ်းကိုသွားပါ။
D-Link ကိုက်ဘ်ဆိုက်ကနေနောက်ဆုံးပေါ် firmware ကို Download လုပ်ပါ
D-Link DIR-320 NRU များအတွက် firmware 1.4.1
လိပ်စာသို့သွားပါ //ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_NRU/Firmware/ နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဆိုတည်နေရာအတွက် extension ကို .bin နှင့်အတူဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ ဤသည် Wi-Fi ကို router ကို D-Link DIR-320 NRU များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အရာရှိတဦးက firmware ကိုဖြစ်ပါတယ်။ 1.4.1 - ဤလက်စွဲစာအုပ်သည် firmware ကို၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းရေးသားခြင်း၏ထိုအချိန်က။
firmware D-Link DIR-320
ဒီအများအတွက်စာနယ်ဇင်းနှင့် 5-10 စက္ကန့်များအတွက်နောက်ဘက်အပေါ် reset button ကိုဖိထား - သင်တစ်ဦးသည် router / ခရရှိပါသည် အကယ်. စတင်မတိုင်မီ, စက်ရုံတွင် settings ကိုမှသူကပြန်စပါ။ သာဝါယာကြိုး LAN မှာမဟုတျဘဲက Wi-Fi ကိုမှတဆင့် firmware update ကို။ မည်သည့် device များ Router ကိုမှကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်နေကြသည်ဆိုပါကထိုသူတို့ကိုကို disable လုပ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
သင်အကြိုက်ဆုံး browser ကို Run - Mozilla Firefox ကို Google က Chrome ကို, Yandex Browser ကိုက Internet Explorer သို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်မှုနှင့်လိပ်စာဘားမှာအောက်ပါလိပ်စာရိုက်ထည့်: 192.168.0.1, ပြီးတော့ Enter ကိုနှိပ်ပါ။
ရလဒ်အဖြစ်သင် login page ကိုမှ redirected နှင့် setup ကို D-Link DIR-320 NRU သို့ရမယ့် password ကိုတောင်းဆိုရန်လိမ့်မည်။ ဤစာမျက်နှာကို Router ကို၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းအဘို့ဖြစ်၏ကွဲပြားခြားနားသောကွညျ့ရှုနိုငျသျောလညျး, မည်သည့်ကိစ္စတွင်အတွက်အသုံးပြုတဲ့စံ user name နဲ့ password ကို default အနေဖြင့်စီမံအုပ်ချုပ်သူ / admin ရဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးလည်းအဆင်းကိုကွဲပြားစေခြင်းငှါအရာသင့်ရဲ့ device ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ, ၏အဓိကစာမျက်နှာလာအောင်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲ update ကို (Firmware update ကို), သို့မဟုတ် "လက်စွဲစာအုပ် Setup ကို" ၌ - - စနစ်က - ဆော့ဖ်ဝဲ update ကို System ကိုသွားပါ။
အပ်ဒိတ်လုပ် firmware ကိုဖိုင်၏တည်နေရာဝင်ဘို့လယ်ပြင်၌, သင်ယခင်ကဆိုက် D-Link ကနေ download လုပ်ဖိုင်ကိုမှလမ်းကြောင်းကိုသတ်မှတ်။ "update ကို" ကိုနှိပ်ပါနှင့် Router က firmware ကို၏အောင်မြင်သောပြီးစီးဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။
Beeline များအတွက် DIR-320 firmware ကို 1.4.1 ချိန်ညှိခြင်း
ထပ် firmware ကို update ကိုပြီးစီးအပေါ်သို့, သင်စံ password ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သော်လည်းကောင်းမေးသော်, ဒါမှမဟုတ်ပဲသင်၏ login နဲ့ password ကိုတောင်းပါလိမ့်မည်ရှိရာလိပ်စာကို 192.168.0.1, သွားပါ။ admin ရဲ့ / admin ရဲ့ - သူတို့ကအားလုံးအတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်။
Oh, နှင့်နောက်ထပ် setup ကိုမှဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်သင့် router ပေါ်တွင် Beeline အင်တာနက်ကိုဆိပ်ကမ်း cable ကိုချိတ်ဆက်ဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ (Beeline Desktop ပေါ်မှာအိုင်ကွန်သို့မဟုတ်လိုမျိုး) ပေါ်တွင်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုရှေ့မှာလည်းအပေါ်ကိုဖွင့်မပေးကြဘူး။ သငျသညျကို USB 3G modem ကနေတဆင့် DIR-320 configuration ကိုမလိုအပ်ပါဘူးမဟုတ်လျှင်, အဲဒီမှာတက် setting အခါ screenshots များ firmware ကို Router DIR-300, ဒါပေမယ့်ကွာခြားချက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တဖန်သင်တို့ရုတ်တရက်လိုအပ်တယ်ဆိုရင် - ငါ့ကိုသက်ဆိုင်ရာမျက်နှာပြင်ရိုက်ချက်များပေးပို့ငါ 3G modem ကနေတဆင့် D-Link ကို DIR-320 ကို configure ဖို့ဘယ်လိုညွှန်ကြားချက်ထုတ် တင်. ပါလိမ့်မယ်။
အောက်ပါအတိုင်းအသစ်က firmware ကိုအတူ router ကို D-Link DIR-320 configuring များအတွက်စာမျက်နှာ:
နယူး firmware ကို D-Link DIR-320
Beeline တစ်ခု L2TP connection ကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့ထို့နောက်စာမျက်နှာကလစ်နှိပ် "အဆင့်မြင့်က Settings" ၏အောက်ခြေကိုရွေးဖို့လိုပါတယ်နှင့် - Network အပိုင်း WAN သို့ကို select နှင့်ဆက်သွယ်မှုများ၏ရရှိလာတဲ့စာရင်းအတွက်စာနယ်ဇင်း "Add" ။
ဆက်သွယ်မှု Beeline Configuring
စာမျက်နှာ2- ဆက်သွယ်မှု Configuring
ထို့နောက် L2TP ကွန်နက်ရှင် Beeline configure: Connection ကိုအမျိုးအစားကိုရွေးချယ် L2TP + Dynamic IP ကိုမှာ "Connection ကိုအမညျကို" ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့အရာကိုရေးအတွက်ဥပမာ - အဘို့, beeline ။ လယ်ကွင်းများတွင်အသုံးပြုသူအမည်, password နဲ့ password ကိုအတည်ပြုသင်၏ ISP အားဖြင့်သင်တို့ကိုမှပေးအထောက်အထားများရိုက်ထည့်ပါ။ VPN ဆာဗာလိပ်စာမှတ် tp.internet.beeline.ru ။ "Save" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အဲဒီနောကျသည့်အခါအထက်ညာဘက်ထောင့်သင်တဦးတည်းကိုပိုမို button ကို "Save" နှင့်လည်းနှိပ်ရပါလိမ့်မယ်။ Beeline ဆက်သွယ်မှုတက် setting အပေါငျးတို့သစစ်ဆင်ရေးမှန်ကန်စွာကြပြီလျှင်, အင်တာနက်ကိုလုပ်ကိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။ ကြိုးမဲ့ settings ကို Wi-Fi ကွန်ယက်ကို configure ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
D-Link DIR-320 NRU အပေါ်ကို Wi-Fi ကိုဖွင့်သတ်မှတ်
အဆင့်မြင့် Settings စာမျက်နှာတွင်, Wi-Fi ကိုသွားပါ - အခြေခံ settings ကို။ ဒီနေရာတွင်သင်၏ကြိုးမဲ့ access point ဆိုအမည်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ DIR-320 ပေါ်တွင် access point name ကို Configuring
Next ကို, သင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့် housemate ကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မည်သည့်ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များအတွက် password ကိုသတ်မှတ်ရန်လိုသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့လုံခြုံရေး settings ကို Wi-Fi ကို select လုပ်ပါ WPA2-PSK encryption ကိုအမျိုးအစား (အကြံပြုသည်) ကိုသွားနှင့် access point ကို Wi-Fi ကိုရန်ဆန္ဒရှိ password ကိုရိုက်ထည့်ပါအနည်းဆုံးအက္ခရာ 8 လုံးပါဝင်သည်ဟု။ settings ကို save လုပ်ပါ။
Wi-Fi password ကို Set
အခုဆိုရင်သင်ဤဆက်သွယ်မှုကို support ကြောင်းကိုသင်၏ထုတ်ကုန်မဆိုထဲကနေကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုဖန်တီးရန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောလက်ပ်တော့အဖြစ်အချို့သောပြဿနာများ, Wi-Fi ကိုမမြင်ရပါဘူးရှိခဲ့သည်လျှင်, ဤဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။
IPTV Beeline ချိန်ညှိခြင်း
Router ကို D-Link DIR-320 firmware ကို Router ကို Setting ကိုရန်လုံလောက်သောသင်သည် 1.4.1 အပေါ် Beeline ကနေ TV ကိုဖွင့်လှစ်ရန်, အဓိကစာမျက်နှာသင့်လျော်သောမီနူးကို item ကို select နှငျ့သငျတဲ့ set-top box ကိုချိတ်ဆက် LAN port များဖြစ်သောကိုသတ်မှတ်။